फेरी के भयो चियावाली श्रृष्टिलाई ? मलाई केही भए कसले जिम्मा लिने भन्दै यसरी धरधरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/फेरी के भयो चियावाली श्रृष्टिलाई ? मलाई केही भए कसले जिम्मा लिने भन्दै यसरी धरधरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । चियावाली भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएकी श्रृष्टिले आफ्नो बारेमा आएको समाचारले आफुलाई निकै चो ट पुगेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो अतितका बारेमा अनावश्यक समाचार बनाएर आफुलाई निकै दुखी बनाएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो विगतलाई यति धेरै वर्ष पछि छरपष्ट पारेको भन्दै त्यसले निकै दुखी बनाएको बताएकी छन् । उनले अनायासै आफ्नो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि यति धेरै चर्चा हुनु संयोग मात्र भएको बताएकी छन् ।
त्यस पछि युट्युवरहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत जिवनको बारेमा अनावश्यक कुरा सार्वजनिक गरिएको भन्दै रिसाएकी छन् । उनले भनिन्, म त्यो भिडियो हेरेर घरमा पुगेर यति रोएँ मैले आफैलाई सिध्याउने बारेमा पनि सोचे । मेरो जिवनका बारेमा त्यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने अधिकार कसले दियो ? मैले के कुरा विर्सन चाहेकी थिए त्यो कुरा मिडियामा ल्याउने अधिकार कसले दियो ? मलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? उनले भनिन् ।
मेरो बारेमा भिडियो आएपछि र कसैले सामान्य सहयोग समेत समेत आएपछि आफ्नो विगतबारे अनावश्यक समाचार भिडियोमा आएपछि निकै चिन्तित भएको बताएकी छन् । म अर्को दिन चिया पकाउन जान पनि सकिन । मेरो विगत ल्याएर मेरो जिवनमा किन घाउ थपिदिएको ? उनको भनाई छ । अर्काको विगतको बारेमा जानकारी लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यो कुरा सकियो । सबै मान्छेको विगत हुन्छ ।
उनले यस्ता कुरा सार्वजनिक हुँदा आफ्नो छोरीलाई पनि नराम्रो असर पुग्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेकी छन् । यस्ता भिडियो सार्वजनिक हुँदा आएका कमेन्टले झन मलाई दुखी बनायो ? त्यस्तो शब्द कसरी लेख्ने हिम्मत गर्यो ? उनले भनिन्, मैले त्यस्तो कुरा लिएर केही नराम्रो निर्णय लिएँ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? उनको भनाई छ ।